कोरियामा एक कामदारले टिकटकमा ‘कामी’ भनेपछि त्यहाँको द’लित समाजले गर्यो का’रबाहीको माग – Eps Sathi
October 27, 2021 1582
इपिएस मार्फत दक्षिण कोरिया पुगेको एक कामदारले सामाजिक संजाल टि’कटकमा भिडियो बनाउने क्रममा ‘कामी’ शब्दको प्रयोग गरेपछि कोरियामा रहेको द’लितहरुको सं’गठन ‘सशक्त द’लित एकता समाज दक्षिण कोरिया’ ले एक प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्दै उनिमाथि का’रबा’हिका लागि माग गरेको छ। ति टिकटक बनाउने ब्यक्ति सुमन थापा हुन भने उनले ‘कालु भाई’ नामको टि’कटक एकाउन्टबाट यहि अक्टोबर २३ मा एक भिडियो बनाएका थिए।
उनले उक्त भिडियोमा लामो समयदेखि नेपाली समाजमा रहँदै आएको जा’तिय वि’भेदलाई बल पुग्ने उखान टुक्काको प्रयोग गरि भिडियो बनाएको र उत्पिडित समुदायको आत्मसम्मानमा ठे’स पुर्याउनुका साथै महिलाहरुलाई पनि अ’पमा’न गर्ने खालका वाक्यहरु प्रयोग गरेको भन्दै सश’क्त द’लि’त एकता समाज दक्षिण कोरियाले आफ्नो ध्यानाक’र्षण भएको बताएको छ।
नेपाली समाजमा द’लित र महिलाहरुलाई हो’च्याउ’ने, अ’पमा’न गर्ने खालका कैयन शब्दहरु छन। यस्ता शब्द र वाक्यले कुनै न कुनै किसिमको मानसिक हिं’सा बोकेको हुनाले आम न्यायप्रेमीहरुलाई मान्य नहुने कुरा पनि एकता समाजले बि’ज्ञप्तिमा भनेको छ। एकता समाजले भनेको छ भिडियो बनाउने क्रममा निज सुमन थापाले जा’तिय भे’दभा’व तथा छु’वाछु’त क’सुर एैन २०६८ को दफा ४ को उपदफा १२ अनुसारको क’सुर गरेको भन्दै उल्लेखित क’सुर अनुसारको का’रबा’हीका लागि दक्षिण कोरियामा रहेको नेपाली राजदूतावासलाई समेत अनुरोध गरेको छ।
सुमन थापाले उक्त टि कटक भिडियो अहिले डि लिट गरिसकेका छन। तर उनले टिकटकमा भनेका कुरा यस्तो थियो – “यहाँ हाम्रो एकजना गोर्खेको चाहिँ १० बर्षको कमाई लिएर स्वा’स्नी टाप भनेर एउटा न्यूज आएको रहेछ। अनि यो घ’ट’नालाई यसो हेरेको मैले। १० बर्षको कमाई खुतु खुतु आँखा चिम्म गरेर बू’ढिलाई पठाएपछि पोइला नगएर कहाँ जान्छन त? विश्वास गर्ने पनि एउटा सिमा हुन्छ। जति नै विश्वास गरे पनि आफू आफ्नो तरिकाले सु’रक्षि’त हुने त कोशिस गर्नुपर्छ नि। सबै पैसा क्यासमा पठाको हैन होला। कहि त इन्भेष्ट गरेको होला। इनभेष्ट गरेको श्रोत चाहिन्छ। कानूनी रुपमा बाँ’धेर राखेको होला। सारा सम्पति लिएर त जाँदैन थ्यो नि त। पैला पैलाको उखान थाहा छैन? कामीलाई बन आईमाईलाई धन नदिनू भनेर? …..”
Prevकोरिया जाने प्रकृया आज बाट सुचारु, ४८ जना कामदार आज कोरियातर्फ प्रस्थान गर्दै
Next११ बर्षपछि कोरियामा राष्ट्रपति चढ्ने प्लेन परिवर्तन हुँदै, कस्तो सुविधा छ नयाँ प्लेनमा जानौं